Booliiska Somaliland ee heeganka la geliyey sideed u fahantay by Abdi Mustafe
Tuesday, 03 January 2017 04:02
Waagii kacaankii Siyaad Barre ayaa waxa la isku xidhi jiray hadal qof yidhi. Waana marxaladii uugu xumayd ee shicibka la gaadhsiiyey. Bileyska Somaliland ee saaka yidhi cidii warbaahinta ka hadasha gacan bira baannu ku qabanayanaa eed malaha ee waxa denbigaa iska le madaxtooyada iyo xisbiga Kulmiye oo amarkan soo bixiyey. Sidaana waxa isku nici doona shicibka iyo Bileyska. Madaxda bileyska way cadayn kari waayeen sababta ciidanka heeganka loo geliyey oo waxa isku qasayeen dhibaato xaafada daami ka dhacday iyo iyagoo afka ka dhowraya dad hadlay oy leeyiin waa la baadhayaa.
Isku soo xoori oo xataa bileyska ayaa waadix ka dhigi kari waayay ujeedada heeganka loo geliyey sababtoo ah waa sifa qaldan oo dad gaara loo jeedo siiba suldaanadii u jawaabay Suldaan Habaar shalay. Waxa laga fahmi karaa xaaladan heeganka in cid gaara loogu caga juglaynayo waxse ka yimi ciidanka bileyska maaha ee waa Kulmiye iyo Madaxtooyada oo aad u caban oo hadladu damqaan. Xukuumad dhacaysaa way rafad badantay oo sidaa darteed bay aleelo uugu waaltay. Dhawaan waxa xaqiiqa inta geel iyo adhi la qalay in xisbiga Kulmiye xafiis kiisa Hargiesa gudihiisa meela gaara la mar-mariyey dhiigii xoolaha sidaana waxa sheegay dad Kulmiye ka baxay.
Heerka Kulmiye marayaa waa neefsa-shadii uugu danbaysay dabeedna isaga oo baqtiya ayaa xigi. Bileysku wuu dulman yay sabab too ah Muse Biixi ayaa madaxtooyada ku soo diraya oo le dadka dhaleecaynta wada ha la joojiyo. Waxaan ku soo duubayaa bal uuraystay ee waxay dhasho aynnu eegno.
More in this category: « Cabdirashiid Cansharaar Oo Habalyo Udiraya Mawlid Idiris Maydhane iyo Marwo Maxamad Nor Oo Meherkoogu Borama Ka Dhacay XISBIGEE QABYAALAD KA MADHAN SOMALILAND? »